poèmes · RAHELY’S Blog – Tous ensemble pour Madagascar – Madagasikara, Malagasy miara-misikina
HELI’S MADAGASCAR – CHORALE ST PAUL MASSY : SOLIDARITE INTERCULTURALITE le 21 novembre 2009 AUDITORIUM Opéra Massy 2 novembre, 2009
Posté par rahelys dans : Culture,Développement,Environnement,Evénements HELI'S MADAGASCAR,Fêtes,Identité malgache,Journée Internationale,musique,poèmes,Solidarité	, ajouter un commentaire
MADAGASCAR ILE CONTINENT OUVERT AU MONDE
RENDEZ-VOUS le SAMEDI 21 NOVEMBRE 2009
- 16h00 à 21h00 à l’Auditorium Opéra Massy 91300 Massy
Discours ouverture par le poète FREDY JAOFERA
Formes d’érosion en LAVAKA et feux de brousse à Madagascar
*Exposition de photos et BD
*Concert, poèmes, variétés musicales de Madagascar
POUR TOUS – ENTREE LIBRE (selon la limite des places disponibles)
*Bus 197 Opéra Massy à prendre porte d’Orléans
*A6 Orly – Massy – Place de France – Opéra
*RER B St Rémy Les Chévreuses – Station Les Baconnets Puis Bus 119 et station Place de France
RAKOTOZANANY STANISLAS: UN GRAND AUTEUR COMPOSITEUR MALGACHE 18 avril, 2009
Posté par rahelys dans : Art - Zava-Kanto,Culture,Hommages,Identité malgache,Malagasy: Teny,Mondialisation,musique,ohabolana - proverbe,Patrimoine de Madagascar,poèmes,Solidarité,Souveraineté nationale malgache,vie quotidienne	, ajouter un commentaire
RAKOTOZANANY STANISLAS, ce grand artiste malgache a fait connaître un groupe artistique malgache SAKELIDALANA qui a chanté ses œuvres dont:
- Ny Lanitra
- Fitia manalasala
- Vetson’ny manina
- Nandalo teto ve ?
RY MALAGASY O MITOMANIA ! 10 février, 2009
Posté par rahelys dans : A lire,A méditer,Développement,Droits civiques,Droits homme,Hommages,poèmes,Solidarité,Souveraineté nationale malgache	, ajouter un commentaire
Fahatsiarovana ireo latsaka tany Antaninarenina
ny sabotsy 07.02.09, Antananarivo
Ry Malagasy o, mitomania,
Ambakaina lava izao,
Atao fitaovana hiakarana,
Hamenoana paosy, hangalarana.
Nalaina ny taninao, alaina ny ainao
Miheritrereta, mailo ianao !
Ianao no antoka koa mitandrema !
Lafo vidy ny ainao sy ny taninao !
Kibo noana tsy mba vatsy
Dia nirenireny nakatsy nakaroa,
Fahafatesana no niandry anao:
Nisaritaka tanaty tosika sy afo.
Voafandrika tanaty vahoaka,
Voaosy, torotoro tsy nahetsika,
Nianjera voatifitry ny basy,
Ra nandriaka feno ny tany.
Nanaraka ireo liam-baovao ianao ,
Nanaraka nanantena fiovam-piainana,
Feno fanantenana sy nofim-baovao,
Ny hoavy mibaliaka an’ny taranaka.
Kanjo fahafatesana, kiaka,
No niandry anao tao,
Tsy nisaina ho ratsy ;
Nanantena fotsiny ianao !
QU’AS-TU FAIT DE TON FRERE ? MPIANDRY NY RAHALAHIKO AHO ! 30 janvier, 2009
Posté par rahelys dans : A lire,A méditer,Enfance - Jeunesse,poèmes,Protection famille	, ajouter un commentaire
L’Homme ou le monstre
Futiles ou spirituelles.
Peut venir de moi,
Peut venir de toi.
RAMANATANTARA, 30.01.09, Paris
MORTS DANS L’INDIFFERENCE GENERALE
A la vie de ton prochain.
Ne le rabaisse pas
Et des monstres, voilà,
Sans foi, ni loi,
En nous ! Oui, en nous !
Et des parents aux enfants,
Les misérables règnent
Ravagent, sèment le chaos.
Sois le sel de la terre !
Respecte, bénis ton prochain
Respecte le, élève toi
Et la Sagesse demeurera.
FAHATSIAROVANA FAHA-40 TAONA NIASA tao amin’ny FPMA (ANDRIAMAMPIANINA Désiré mivady) 26 octobre, 2008
Posté par rahelys dans : A lire,Anniversaire,Evénements HELI'S MADAGASCAR,Fêtes,poèmes	, ajouter un commentaire
Tononkalo ho fahatsiarovana ny faha-40 taona
niasan’andriamatoa ANDRIAMAMPIANINA Désiré mivady
tao amin’ny FPMA
Faritany Atsimo Andrefana misy azy
Manao ny Jôbiliny ny alahady 26 oktobra 2008
Endrey ny fahasoavana iantsoan’ny Ray antsika
Hiara-mivavaka eto amin’ity andro manan-daza !
Fotoana iray tena miavaka toy ny kinta-manjopiaka
Tena androm-pitahiana ho an’ny lehibe sy ny zaza.
Fotoana natokantsika hisaorana an’Andriamanitra,
Fototr’aina, Foto-tsoa, Ilay Izy hatramin’ny Taloha,
Antom-pahavelomantsika, Raintsika any an-danitra,
Tsy mahafoy ny asan’ny tànany, be fitiavana tokoa.
Matoa isika tonga eto, tsy noho ny herin-tenantsika
Fa noho ny famindrampony ary koa ny fahasoavany.
Ampahereziny hatrany isika raha mila hangatsiaka.
Eny, tsy takatry ny saina raha ny haben’ny fitiavany.
Porofo maneho izany izao Jôbily masina eto izao
Izay anasana ny rehetra hiombom-po amam-panahy.
Ho voninahitry ny Anarany ny asa rehetra izay atao
Tanimboalobony isika ary Izy kosa no Ray Mpiahy.
Akory ny haben’ny haravoana tratr’ity andro Jôbily !
Jôbilin’i pasitera ANDRIAMAMPIANINA Désiré
Mivady. Mirodorodo ny rehetra ary tsy nivilivily
Nisy ny nandeha fiara, tao koa ny nandray TGV.
Ny Tompo Andriananahary no niantso sy nifidy
Sy nanokana azy ireo ho fiasana am-pelatanana
Mpanompo vonona tokoa ka tsy niamboho adidy.
Tsy manavakavaka izy sady mandala fihavanana.
Ny raibeny dia mpitandrina. Asa misy fihafiana.
Ny ray sy reniny mpampianatra. Raha vao valo
Taona monja izy dia tratry ny fahakambotiana
Maty rainy ka nafoy. Ny fiainana mampimalo.
Rehefa nandeha tany amin’ny toby Farihimena
Izy dia nandre antso. Tsy tafandrimandry intsony
Ary tsy niandriandry fa dia niroso ho katekomena
Dia noraisina ho Mpandray ka ravoravo ery ny fony !
Rehefa tonga izany antso dia mandoro ny ao anaty
Naniry ny ho mpitandrina izy, tena faniriana lalina…
Faniriana nitombo vahana, nitrebona tsy mety maty
Ka nohatoniny ny reniny satria tiany hampahafantarina.
Raha ny asan’ny mpitandrina dia tena misy fihafiana,
Fanta-dreniny tsara izany hany ka tsy tena narisika
Izy. Tsy foiny hijaly ny solofony na ho be fanahiana
Nefa notsofiny rano ihany rehefa hitany nisisika.
Mbola niofana aloha satria manko ny asa fanompoana
Tena ilana fiofanana. Afa-panadinana idirana ho kolejy
Tao Ambohipotsy no nianarany. Tao aminy ny fahazotoana
Ka nifotorany tokoa izany. Nianatra fa tsy variana nikarenjy.
Dia natokana ho Mpitandrina taona vitsy taty aoriana
Vonona hitondra zioga na ho voky na ho noana
Ary tsy mba misy reharehany afa-tsy ny hazo fijaliana
Ka ny asa fitoriana dia tena nataony tam-pinoana.
Dia niroso ihany koa tamin’ny lalan’ny fanambadiana
Ny niantefan’ny safidiny dia ramatoa Lala HARIMBELO
Tojo ny tia sy ny tiana ka tsy hay lazaina ny hafaliana
Vady tolo-janahary, miara-dia hatrany na faly na malahelo.
Taorian’izay indray dia nanohy nianatra taty Andafy
Hahazoana ny licence ka nikofokofoka aok’izany.
Nohararaotiny ny fotoana. Tsy moramora fa nihafy…
Nody ventiny izany ka lasa Tale tao amin’ny Akany,
Dia Ilay Akany kristianina an’ny FFPM ao Antsahamanitra,
Izay natokana indrindra indrindra ho fitaizana ny zazalahy,
Ho fanabeazana ny maha-olona, ho voninahitr’Andriamanitra.
Adidy amin’ny taranaka ny fikolokoloana ny aim-panahy.
Anisan’ny nanohana azy hatrany tamin’ny asa fanompoana
Niara-dia na aiza na aiza tany aleha, tsy namela azy ho irery
Dia ramatoa Lala HARIMBELO vadiny. Eny, tam-pinoana
No nandraisany izany ho Adidy masina. Sanatria tsy an-tery.
Efa nandrindra tao amin’ny FPMA Paris ary koa Poitiers
Sy Saint-Simon teo aloha sady tao amin’ny Birao Foibe
Nandritra ny taona maro i pasitera Andriamampianina Désiré.
Tsy hohadinoina koa ny FPMA Bordeaux. Moa tsy izany ve ?
Tao koa ireo zanany telo mianadahy avy amin’ny Tsitoha,
Izay tsy nanakana azy na oviana tamin’ny asa fitoriana
I Hanitriniaina sy Mbelotiana no teraka taty Andafy moa
I Henintsoa no tany Madagasikara izay Akany niaviana.
Tamin’ny taona 68 no nanombohany tamin’ny FPMA
Efapolo taona izao. Isaorana ny Ray, fahasoavana tokoa.
Nahay nifandray tsara tamin’ny Malagasy sy ny Vazaha.
Ny traikefa dia ananany. Ny talenta nampiasainy koa.
Tsara homarihina fa izy tsy mpitandrina matihanina
Tsy nandraisany karama mihitsy ny asa fitandremana
Noho izany dia niasa i pasitera Andriamampianina
Satria moa efa aty am-pita no nofinidiny ho fonenana.
Tsy zoviana amintsika i pasitera Andriamampianina
Namela dindo ny Efapolo taona nitandremany taty
Niasa tamin-joto hatrany, Mpitandrina tsy matihanina
Nitory ny Vaovao Mahafaly dia ny Filazantsaran’i Kristy.
Niainan’izy mivady ireto ny fanahim-panetrentena.
Tsy fombany ny misehoseho fa miasa am-pitiavana
Tena toetrany izany. Ny mandefitra no fahendrena
Na reraka aza indraindray mbola entanim-piniavana.
Efa nisy fotoana naha-tompon’andraikitra ny FPMA
An’i pasitera Andriamampianina. Izy no nisolotena
Raha nisy nilana izany. Tena midadasika ny saha
Nefa notontosainy am-pitiavana, an-tsitrapo, tsy noterena.
Ny Faritany Atsimo Andrefana no nandray an-tànana
Ny fanatontosana ny Jôbily izay iainantsika etoana.
Ravoravo am-panahy ny Vaomieran’ny Fampihavanana
Tsy ambakan’izany koa ny Vaomieran’ny fanompoana.
Mbola ananany andraikitra ireo Vaomiera roa ireo
Tsy miamboho adidy izy. Nekeny tamim-pitiavana
Mpanompo vonona hanompo. Na oviana tsy ho leo.
Ny hazo fijaliana nentiny ka tsy nasiany fandavana.
Hita fa nanamarika azy tokoa ny fiainana taty Andafy
An’Andriamanitra ny fandaharana. Izy fiasana ihany.
Amin’izao fotoana izao dia efa fito mianadahy ny zafy.
Fahasoavana avy amin’ny Ray ka isaorany azy hatrany.
Koa arahaba ry izy mivady tratr’izao fotoana izao ;
Andro notahin’ny Tompo, tena fahasoavana tokoa.
HO VONINAHITR’ANDRIAMANITRA izay tsy mandao
Na oviana fa momba sy mitahy, tia sady manasoa.
Enga anie ity Jôbily masina ity mba hanjary fitahiana
Ho an’ny lavitra sy ny akaiky, ny FPMA manontolo,
Ka tsy hisy ho diso anjara ary hampitoetra fifaliana
Noho ny asan’ny Fanahy izay miahy sy manolokolo !
Ramatoa RAHARIJAONA Marie-Angèle, Mpitandrina
CHRIST-ROI faha-26 oktobra 2008